Saldhiga Balcad oo Qarax miino ka dhacay | Gedoonline
Saldhiga Balcad oo Qarax miino ka dhacay	Added by Editor on July 21, 2012.Saved under Latest News	BALCAD(GMN)-Goob joogiyaal ku sugan Degmadda Balcad ee gobbolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegaya in halkaasi qarax miino uu ka dhacay.
Qarax ayaa la sheegay inuu noociisu ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa la soo sheegayaa in uu ka dhacay meel u dhaw saldhiga ciidamada dowladda KMG ee degmada Balcad.
Goob jooyaal ayaa sharaxay in ciidamadda dowladda KMG ay sameeyeen hawlgallo kadib markii uu qarax dhacay.
Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi sidoo kale waxaana jirin wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamadda dowladda ee degmada Balcad.
Degmada Balcad ayaa waxaa ku sugan ciidamadda dowladda KMG oo ay wehliyaan kuwa AMISOM kuwaasi oo dhawaan la wareegay degmadaasi.
Kulan looga hadlayo ammaanka oo ka dhacay Balcad
Dowladda KMG oo ku hawlan sidi ay canshuur ugu bilaawi lahayd Balcad